Hank Azaria wuxuu ku ciyaari doonaa Tim Cook taxanaha Uber Super Pumped si loogu soo bandhigo Showtime | Waxaan ka imid mac
Hank Azaria wuxuu ku ciyaari doonaa Tim Cook taxanaha Uber Super Pumped si loogu soo bandhigo Showtime
Abaalmarinta Emmy Abaalmarinta Hank Azaria si uu ugu ciyaaro Maamulaha Apple ee hadda Tim Cook taxanaha Uber Super bamka loogu talagalay Showtime. Hank Azaria wuxuu caan ku yahay inuu ka dhawaajiyo Moe Szyslak taxanaha riwaayadaha ee nooca Ameerika. Simpsons-ka iyo jilitaanka taxanaha iyo filimada badan.
Sida laga soo xigtay daabacaadda Kaladuwan, Azaria waxaa ku biiraya Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler iyo Kerry Bishé. Gordon-Levitt Wuxuu ciyaari doonaa agaasimaha guud ee Uber iyo aasaasaha aasaasaha Travis Kalanick. Chandler Wuxuu ciyaari doonaa agaasimaha guud ee shirkad maalgalinta Texas, Bill Gurley. Kerry Bishe Wuxuu ciyaari doonaa Austin Geidt, lambarka shaqaalaha 4 ee Uber.
Jospeh Gordeon-Levitt waa soo saaraha, abuuraha iyo agaasimaha taxanaha Mr. Corman ee Apple TV +, taxane ah kii labada qaybood ee hore ayaa hadda laga heli karaa madal fiidiyaha ka soo qulqulaya Apple, wadarta 1aad ee qayb ka ah xilli -ciyaareedka koowaad.
Xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee Super bamka wuxuu ku salaysan yahay buugga Mike Isaac wuxuuna na tusayaa markaas agaasimaha guud ee Uber Trevor Kalanick iyo xiriirka uu la leeyahay lataliyihiisa Gurley. Taxanaha rwuxuu daaweyn doonaa rookaha roogga ee shirkadda xamuulka ee upstart, oo astaan ​​u ah kor -u -kaca iyo hoos u dhaca Dooxada Silicon. Taxanaha ayaa diiradda saari doona sheeko muhiim ah oo ka socota adduunka ganacsiga kala duwan xilli kasta.
Beth Schacter waa wada-qoraa, agaasime iyo agaasimaha fulinta de Super bamka oo leh Brian Koppelman iyo David Levien. Paul Schiff, Allyce Ozarski iyo Stephen Schiff ayaa sidoo kale ah soosaarayaal fulineed.
Weli lama garanayo goorta taxanaha la soo bandhigi doono ama inta shaashad ee Tim Cook (aka Hank Azaria) lahaan doonto, laakiin waxay noqon doontaa wax xiiso leh in la arko qof u dhaqmaya sidii maamulaha Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Hank Azaria wuxuu ku ciyaari doonaa Tim Cook taxanaha Uber Super Pumped si loogu soo bandhigo Showtime
Ku-biirinta shaqada fool-ka-foolka ah ee Apple Park ayaa dib loo dhigay illaa Janaayo
DigiTimes waxay ku adkeysaneysaa sii -deynno badan oo Apple ah bisha Sebtember